Iidyunivesithi ezi-8 ezigqwesileyo eNova Scotia ngemirhumo yazo 2022
Disemba 8, 2021 Eze uThadayo
Iidyunivesithi ezi-8 ezigqwesileyo eNova Scotia ngemirhumo yazo
Iidyunivesithi ezilungileyo kakhulu eNova Scotia zidweliswe kwaye zaxoxwa kule post yebhlog. Iinkcukacha ezithe vetshe ngeefizi zabo zokufunda zikwabonelelwe ukukwazisa ngeendleko zayo nayiphi na into oyenzela isicelo.
Kukho izinto ezithile ezenza ukuba iyunivesithi okanye ikholeji ithathwe njengeyona ibalaseleyo. Ezi zinto zinokubandakanya umgangatho wezifundo kunye neenkqubo zophando, impumelelo yabafundi abaphumeleleyo, iinjongo, kunye nolwalathiso, igalelo kwinkalo ethile, ubunkokeli, ukufundisa, njl.
Kukho amaqonga avunyiweyo ngokubanzi amiselwe injongo eyodwa yokucazulula izikolo ngokusekelwe kule miba ingentla neminye emininzi. Ukusuka kwiziphumo zophando kunye nohlalutyo, izikolo ke zibekwe ngokwendlela ezilunge ngayo, nokuba kukufundisa, kuphando, okanye kwizifundo ezinikezelwayo.
Ukuba usanda kuphuma ekholejini kwaye ujonge isikolo onokuthi uye kuso, akunyanzelekanga ukuba uhambe kwinkqubo yophando kunye nokuhlalutya iinkcukacha zesikolo ngasinye esifuna esona sihle. Ezi nkcukacha zinikwe kwiibhlog ezahlukeneyo kwi-intanethi okanye unokubuza utitshala wakho, inqununu, okanye umcebisi wakho.
Umzekelo, kanye njengoko sibhalile saza sapapasha eli nqaku kwiiyunivesithi ezilungileyo kakhulu eNova Scotia kunye neqela lezinye iiyunivesithi ezigqwesileyo, unokufumana izithuba zebhlog kwisikolo obusoloko uphupha ukuya kuso kwaye ufunde ngokulula ukuze uqonde ukuba yintoni na. ibenza babengcono.
Ngoku, esi sithuba sebhlog sixoxa ngezona yunivesithi zibalaseleyo eNova Scotia kodwa ngaphambi kokuba singene kuyo makhe sibone ukuba iphi iNova Scotia kwaye iyindawo elungileyo yabafundi.
Iphi iNova Scotia?
Zingaphi iiDyunivesithi ezikwiNova Scotia?
Uzifumana njani iiDyunivesithi ezilungileyo eNova Scotia
Iidyunivesithi ezilungileyo kakhulu eNova Scotia
1. IYunivesithi yaseDalhousie
2. IYunivesithi yaseAcadia
3. IYunivesithi yaseSaint Mary
4. IYunivesithi yaseSt Francis Xavier
5. IYunivesithi yaseMount Saint Vincent
6. IYunivesithi yaseCape Brendon
7. IYunivesithi yeNSCAD
8. IYunivesithi yaseKing College
INova Scotia lelinye lamaphondo aselwandle eCanada kwaye uninzi lwabemi balo bathetha isiNgesi. Ke, umqobo wolwimi kubafundi bamazwe aphesheya ususiwe.
Lulwazi oluqhelekileyo ukuba iCanada yindawo yokufunda edumileyo phakathi kwabafundi bamazwe aphesheya. Oku kungenxa yokuba iiyunivesithi ziphakathi kwezona zibalaseleyo kwihlabathi, iinkqubo zesidanga semfundo zamkelwa ngokubanzi, izifundo kunye neendleko zokuphila ziyafikeleleka, kwaye ikhuselekile ngokubanzi.
Abantu balapha banobubele kwaye banesisa kubantu basemzini besenza ukuba uzive ngathi awuzange ulishiye ikhaya. Kwaye iphondo laseNova Scotia yenye yeendawo ezinezona zikolo zibalaseleyo zaseCanada esixoxe ngazo apha.
Kukho iiyunivesithi ezilishumi eziseNova Scotia kwaye zonke ziiyunivesithi zikawonke-wonke.
Iiyunivesithi ezilungileyo kakhulu eNova Scotia zidweliswe kwaye zaxoxwa ngezantsi. Ndithi uphendlo lwakho luphelile.
Iiyunivesithi ezilungileyo kakhulu eNova Scotia ekugqibeleni kuxoxwe ngazo kweli candelo. Ufunde kakuhle.
University of Mary Mary
Yunivesithi yaseFrancis Xavier
IYunivesithi yaseNtaba iSt Saint Vincent
IYunivesithi yaseCape Brendon
KwiYunivesithi yaseKing College
IYunivesithi yaseDalhousie yenye yezona yunivesithi zibalaseleyo eNova Scotia naseCanada iyonke. Yasekwa ngo-1818 njengeyunivesithi yophando yoluntu eseHalifax, eNova Scotia. Inekhampasi ezine zizonke eHalifax, Truro, Yarmouth, naseSaint John. Kumanqanaba ehlabathi, iyunivesithi ibekwe kumanqanaba angama-201-317, kwaye kwinqanaba lesizwe, ikwindawo yesi-8-12.
Esi sikolo sahlulwe sangamacandelo ahlukeneyo ali-13 athi wona agcine amasebe angaphezu kwama-60, iikholeji kunye nezikolo zidityanisiwe. Ngokudibeneyo, babonelela ngezifundo ezingaphezu kwe-4,000 kwiinkqubo ezingaphezu kwama-200-degree. Ezi nkqubo zintsha zitsala abafundi, abaphengululi, abaphandi, kunye nabasebenzi abavela kwiimvelaphi ezahlukeneyo ukuba basebenzisane kwaye bafezekise iinjongo kunye neenjongo zesikolo.
Zonke iinkqubo zemfundo zikwinqanaba lesidanga, isidanga, kunye namanqanaba ezifundo zobungcali. Umrhumo wokuya kwiYunivesithi yaseDalhousie yohluka ngokweenkqubo zesidanga kunye nohlobo lomfundi, oko kukuthi, umfundi wamazwe ngamazwe okanye wasekhaya. Unokubona ukucazululwa kwayo yonke imirhumo nge ngokunqakraza apha.
IYunivesithi yaseAcadia yasekwa ngo-1838 njengeyunivesithi yoluntu, yenkululeko yobugcisa eWolfville, eNova Scotia, eCanada. Yenye yeeyunivesithi ezilungileyo kakhulu eNova Scotia kwaye yabekwa kwindawo Maclean, njenge-5th esona sikolo siphantsi kwesidanga sokuqala eCanada. Iyunivesithi igxile ngakumbi kwiinkqubo zesidanga sokuqala.
Ngaphandle kwenkqubo yesidanga sokuqala, ezinye iinkqubo ezibonelelwayo zibandakanya iinkqubo zesidanga, ukufunda kwi-Intanethi, isatifikethi kunye nemfundo yobutitshala, kunye neziko lolwimi lwesiNgesi. Amacandelo amane apha buBugcisa, iSayensi enyulu neSetyenzisiweyo, iziFundo zobuNgcali, kunye neTheology. Ngala makhono, ngaphezu kweenkqubo ze-40 zinikezelwa kubafundi bamazwe ngamazwe nabasekhaya.
Imali yokufunda yabafundi baseNova Scotia yi-$9,725.86, kwabanye abafundi baseKhanada abangaphumi eNova Scotia imali yokufunda yi-$11.008.86, ngelixa abafundi bamazwe ngamazwe behlawula i-$21,049.86.
Umrhumo wokufunda wabafundi baseNova Scotia yi-$8,138.50, yabanye abafundi baseKhanada i-$9,412, kwaye kubafundi bamazwe ngamazwe, yi-$19,158.
Ukufundiswa kwePhD yi-$10,147 kubafundi abavela eNova Scotia, i-$11,430 yabanye abafundi baseKhanada, kunye ne-$22,860 kubafundi bamazwe ngamazwe.
IYunivesithi yaseSaint Mary sisikolo esidumileyo eHalifax, eNova Scotia esaziwa ngeshishini laso, ikhemistri, kunye neenkqubo zebasketball zabasetyhini. Yiyunivesithi yoluntu eyasekwa ngo-1802 kwaye yamkelwa njengeyona yunivesithi ibalaseleyo eNova Scotia. Ibekwe kwindawo yesi-4th eyunivesithi igqwesileyo eCanada.
Esi sikolo sahlulwe saziiFakhalthi zoBugcisa, iSikolo seSobey soShishino, iSayensi, kunye nezifundo zesidanga kunye noPhando. Ngala makhono, ngaphezu kweenkqubo ze-60 zinikezelwa kwiiprogram zesidanga sokuqala kunye nesidanga, izatifikethi kunye neediploma, imfundo eqhubekayo, kunye nezinye iinkqubo.
Ungazibona zonke iifizi zezifundo zesidanga sokuqala kunye nesidanga seenkqubo ezithile kwikhonkco elingezantsi
IYunivesithi yaseSt. Francis Xavier ibekwe phakathi kwezona yunivesithi zibalaseleyo eNova Scotia. Yiyunivesithi yoluntu yobugcisa benkululeko eseAntigonish, eNova Scotia. Yasekwa ngo-1853 kwaye inxulunyaniswa necawa yamaRoma Katolika. Kumanqanaba ehlabathi, iyunivesiti iphakathi kwezona yunivesithi zibalaseleyo ezingama-801-1000 ehlabathini kodwa inqanaba layo lesizwe kwizifundo zesidanga sokuqala si-9 ngo. Maclean.
Iyunivesithi igcina iFaculty of Arts, Science, and Education, iGerald School of Business, iBrian Mulroney Institute of Government, kunye neCoady International Institute. Ezi zakhono kunye nezikolo zibonelela ngoluhlu olubanzi lweenkqubo zemfundo ngamasebe aphantsi kwazo.
Nangona igxile kakhulu kwimfundo yabangekabinazidanga, iimasters kunye nePh.D. iinkqubo, kunye nemfundo co-op, kunye neenkqubo zemfundo eqhubekayo kunye nomgama nazo zinikezelwa. I-scholarship iyafumaneka kuye wonke umfaki-sicelo ukuba afake isicelo ukuze axhase imfundo yabafundi.
Eyaziwa ngokuba yiMount, yenye yezona yunivesithi zibalaseleyo eNova Scotia. Yiyunivesithi yoluntu eyasekwa ngo-1873 eHalifax, eNova Scotia, kwaye igxile ikakhulu kwimfundo yesidanga sokuqala. Amandla obugcisa, isayensi, izifundo zobungcali, imfundo, kunye nezifundo zabathweswe izidanga.
INtaba ibonelela ngaphezulu kwe-40 yeenkqubo zesidanga sokuqala kubandakanya itekhnoloji yolwazi, ulawulo lweshishini, kunye nokusetyenziswa kwesondlo somntu. Kukwakho nesidanga nesidanga sePh.D. iinkqubo zesidanga ezifana nezifundo zosapho kunye ne-gerontology, ubudlelwane boluntu kunye nezifundo zabasetyhini, kunye nezifundo zemfundo. Ngaphezulu kwezifundo ze-190 zinikezelwa kwi-intanethi.
Umrhumo wokufunda wabafundi basekhaya abenza isidanga sokuqala ukusuka kwi-8,387 yeedola ukuya kwi-8,805 yeedola ngonyaka ngelixa i-6,550 yeedola. Abafundi bamazwe ngamazwe kwinkqubo yesidanga sokuqala bahlawula imali yokufunda phakathi kwe-$19,534 – $19,951 ngelixa abafundi abathweswe izidanga zii-$13,304.
Kuluhlu lwethu lwesithandathu lwezona yunivesithi zibalaseleyo eNova Scotia yiYunivesithi yaseCape Brendon. Yiyunivesithi yoluntu ebekwe eSydney, eNova Scotia, esekwe ngo-1951. Ijolise ikakhulu kwimfundo yabangekabinazidanga, ke ngoko, ibonelela ngoluhlu olubanzi lweenkqubo zesidanga sokuqala ezifana nobunesi, imfundo, ubugcisa, ishishini, kunye nobunjineli. Iiprogram zesidanga kunye neengcali nazo zibonelelwa kodwa azininzi.
Isikolo samkela abafundi abavela kuzo zonke iinkalo zobomi kwaye ngamnye kubo unokufaka isicelo sokufunda kunye noncedo lwemali. Iindleko zokufunda zixhomekeke kwindawo okuyo. Abafundi abavela eNova Scotia bahlawula imali yokufunda yonyaka eyi-$8,244, abanye abafundi baseKhanada bahlawula i-$9,527 ngonyaka, kwaye abafundi bamazwe ngamazwe bahlawuliswa i-$18,515 ngonyaka.
Ikholeji yeNova Scotia yoBugcisa kunye noYilo (NSCAD) sisikolo sobugcisa sikarhulumente eHalifax, eNova Scotia, esasekwa ngo-1887, kwaye sabekwa phakathi kwezona yunivesithi zibalaseleyo eCanada. Izidanga zeBachelor zibonelelwa kubugcisa obuhle, uyilo, kunye nembali yobugcisa. Izidanga zeMasters zibonelelwa kubugcisa, ubugcisa obuhle, kunye noyilo.
Ukuba ufuna ukungena kulo naluphi na uhlobo lobugcisa obunjengomzobo, ukupeyinta, ukufota, ifilimu, amalaphu, iiseramikhi, ifashoni, kunye nezinye iindlela zobugcisa I-NSCAD kufuneka ibe kuluhlu lwakho oluphezulu. Iinkqubo zayo zamkelwa ngokubanzi kulo lonke elaseCanada kwaye uya kufumana idigri eyaziwayo kwihlabathi jikelele.
Kuluhlu lwethu lokugqibela lwezona yunivesithi zibalaseleyo eNova Scotia yiYunivesithi yaseKing's College. Yiyunivesithi yobugcisa benkululeko kunye nelinye lamaziko amadala emfundo ephakamileyo eKhanada, eyasekwa ngo-1789. Eli ziko laziwa ngeNkqubo yoNyaka weSiseko, inkqubo ebanzi kunye neenkqubo ezahlukeneyo zabafundi bonyaka wokuqala. Yikhosi yophando olunzulu lwembali, ifilosofi, kunye noncwadi kwisithethe sasentshona.
Iiprogram zamabanga aphantsi kunye nabathweswe isidanga zibonelelwa ukuba zikhokelele kwi-BA, BSc, BJH, BMus, BJ, MJ, kunye ne-MFA. Abafundi bamazwe ngamazwe bamkelwa kuyo nayiphi na inkqubo. Ukufundiswa kweemali zokufunda kunye neebhasari zikwanikezelwa kubafundi ukuze bahlawule iindleko zabo zokufunda.
Oku kuzisa esiphelweni kwinqaku malunga neeyunivesithi ezilungileyo kakhulu eNova Scotia kwaye ndiyathemba ukuba zibe luncedo ekukuncedeni uthathe isigqibo sokuba sesiphi isikolo saseNova Scotia, eCanada onokuthi usifake isicelo.
Izikolo ezili-10 zeShishini eziBalaseleyo eCanada ngeeScholarship
I-15 Post Graduate Permit yokuSebenza kwiikholeji zabucala eCanada
Ungasifaka kanjani isicelo kwaye uphumelele iVanier Canada yeziDanga zokuFunda
Ungaphumelela njani iTrudeau Foundation Scholarship eCanada nakwiPhD
Iimfuno zeYunivesithi yaseQueen | Imirhumo, iiScholarship, iRenki, iiNkqubo
I-12 yeZikolo eziBalaseleyo zeAerospace zobunjineli eCanada
Post Previous:Izikolo ezingama-35 eziBalaseleyo kwiCosmetology kulo lonke elase-US kunye neMirhumo yazo yangoku
Okulandelayo Post:Izikolo eziPhezulu ezili-10 zaBucala eNgilani